FILOHAN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA : Natao hanompo vahoaka ny Depiote
Hentitra ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny Depiote Razanamahasoa Christine raha nanamarika fa tsy fitadiavana tombontsoa manokana velively ny maha solombavambahoaka fa hanompoana ny firenena ary fikatsahana izay mahasoa ny firenena. Adidy mavesatra, hoy izy, ny andraikitra hiantsorohan’ireo Depiote. 19 août 2019
Tapitra hatreto ny kajikajy politika sy ny fitadiavana tombontsoa manokana eny anivon’ny Antenimieram-pirenena. Fanamby lehibe apetraky ny filohan’ity andrim-panjakana ity ankehitriny ny hanafoana ny resaka malety sy ny endrika kolikoly amin’ny lafiny rehetra. Noho izany dia tsy hisy intsony ny famenoana paosy sy fangoronan-karena tahaka ny tranga nisy tamin’ireo Depiote sasany tamin’ny fitondrana teo aloha. Henjana ihany koa ny fitakiana tamberin’andraikitra amin’ireo solombavambahoaka mba tena hisy fiantraikany amin’ny vahoaka ny asa hataon’izy ireo. Ankoatr’izay tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanaraha-maso ny asan’ny fahefana mpanatanteraka ireo solombavambahoaka.
Izy ireo no miady ny tombontsoan’ny vahoaka eny amin’ny Distrika nahalany azy ary lehibe indrindra ao amin’ny asan’ireo Depiote ihany koa ny fanolorana volavolan-dalàna. Manoloana ireo, tsy kely ny asa miandry ireo solombavambahoaka. Nanamafy izany ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny Depiote Razanamahasoa Christine izay nilazany fa “tsy natao hitadiavana tombontsoa ny maha solombavambahoaka fa hanompoana ny firenena. Adidy mavesatra no hiantsorohan’izany Depiote izany”. Nandritra ny fitsidihana ofisialy notanterahin’ny Depiote Razanamahasoa izay sady filohan’ny Antenimieram-pirenena tany Ambatofinandrahana, Distrika nahalany azy no nanaovany izany lahateny izany. Tamin’io ihany koa no nanaovany ny lanonana manetriketrika noentiny nisaorana sy nankasitrahany ireo vahoaka nametraka fitokisana taminy, ka nahavoafidy azy ho solombavambahoakan’ity Distrika ity.
Na dia vao manomboka ny fe-potoam-piasana aza dia efa nisy sahady ny fivoarana tao anatin’ny Distrikan’ Ambatofinandrahana. Tafapetraka ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana any an-toerana ary misitraka izany ny ankamaroan’ireo Kaominina mandrafitra ity Distrika ity. “Vao kandidà ny tena satria miaraka amin’ny Filoha Andry Rajoelina, avy hatrany dia tonga ny fandriam-pahalemana aty aminay, izay no tena fivoarana lehibe”.
Nambaran’ny Filohan’ny antenimieram-pirenena fa efa taratr’ilay tamberin’andraikitra hatao amin’ny vahoaka ny fanaovana fankasitrahana azy ireo tahaka izao. Nandritra io lanonana io no nanaovana ny nofo mitampihavanana. Henim-boninahitra tanteraka ity lanonana ity, nahitana taratra ny firaisan-kinan’ireo solombavambahoaka ihany koa satria tonga nanontrona ny Filohan’ny antenimieram-pirenena tany Ambatofinandrahana avokoa na ireo solombavambahoaka tsy miankina na ireo solombavambahoaka avy amin’ny antoko Tiako I Madagasikara. Tonga tany an-toerana ihany koa ireo mpikambana sasany eo anivon’ny governemanta.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68236) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (404) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (178) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (93) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (86) 21 février 2020